Binance फ्यूचर ट्रेडिंग सल्लाह - लाभ उठाउने - Bitcoinxxo
किन तपाईं 20% शुल्क छुट द्वारा प्राप्त गर्नुपर्छ Bybit द्वारा
ब्याबिट मार्जिन ट्रेडिंग शुल्क छुट कसरी २०% अप गर्ने
२०% छूट बाईट कमिशन रेफरलमा
बिनान्स फ्युचर्सको सफल सुरुवातको पहिलो महिनामा हामीसँग x गुणा बढी छ।
बिनान्सले एक कस्टम लिभरेज सुरू गर्‍यो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्रेडिंग गर्ने बित्तिकै उनीहरूको मनपर्दो लाभ उठाउन छनोट गर्न सक्छ।
यस अद्यावधिकमा प्रयोगकर्ताहरूले १२ utilx सम्ममा उनीहरूको उपयोग बढाउन सक्दछन्!
पछिल्लो महिनामा, Binance फ्यूचर्सले प्रयोगकर्ताहरूलाई २०x लिभरेज प्रदान गरेको छ।
भर्खरको अद्यावधिकले तपाईंलाई १x वा १२०x सम्म लिवरेज सेट गर्न अनुमति दिन्छ, तपाईं ट्रेडिंग गर्न चाहानु हुने युएसडीटीको मात्रामा निर्भर गर्दै, सम्बन्धित मार्जिन र टेर भिन्न हुनेछ।
यस नयाँ सुविधाको साथ, अहिले Binance फ्यूचरमा सामेल हुन कुनै राम्रो समय छैन!
अब एक Binance खाता सिर्जना गर्नुहोस् र शुल्कमा २०% लाइफटाइम छुट पाउनुहोस्!
बिनान्स रेफरल २०% बन्द कोड
यहाँ things चीजहरू छन् जुन तपाईलाई जान्न आवश्यक छ बिन्सेन्स फ्यूचरमा नयाँ प्रमुख अपग्रेडको बारेमा।
१.२०x लाभ उठाउँदै तपाईंको ट्रेडिंग स्थिति बढाउनुहोस्।
बिनान्स फ्यूचरमा ट्रेड गर्ने मुख्य फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यो धेरै पूँजी कुशल छ। स्पट बजारमा, तपाइँले 1BTC लाई ट्रेड गर्नको लागि हजारौं USDT राख्नु पर्छ, तर बिनान्स फ्यूचरको साथ, तपाईं थोरै शुल्कका लागि खोल्न सक्नुहुनेछ। र अधिक लाभ, कम पैसा तपाईं ठाउँमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
मानौं कि Bitcoin को वर्तमान मूल्य १००० अमेरिकी डलर हो (गणनाको सजिलो / अवस्थित गर्न इच्छुक)। तपाईंसँग १०० USDT छ, जो एक्लो एक्लै ०.०१ BTC किन्न सक्छ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ बिनान्स फ्युचरमा १०० अमेरिकी डलर ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ १२ 125xx सम्म लिभरेज र खुला खरीद / लामो वा बेच्ने / १.२ B बीटीसीसम्मको छोटो स्थितिमा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ।
यस प्रकार, तपाईले १.२25 बीटीसी स्थितिबाट अधिक नाफा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईले ०.०१ बीटीसी मात्र किन्नुभयो भने खुला स्थानको लागि क्रिप्टोकरन्सीको सानो रकम प्रयोग गर्दा।
२. त्यसोभए १२ 125 गुणा २० गुणा भन्दा राम्रो हुन सक्छ।
मानौं तपाईंले पछिल्लो हप्ता १०० USDT समात्नुभयो जब यस हप्ताको सट्टा २०x थियो। (१ BTC अझै १०,००० USDT थियो) यस परिदृश्यमा तपाईंले खोल्न सक्नुहुने सब भन्दा ठूलो ठाउँ ०.२ BTC हुनेछ।
मानौं तपाईं दुबै परिदृश्यहरूमा खरीद / दीर्घकालीन स्थिति लिनुभयो। एक घण्टा भन्दा कममा, BTC १०,००० USDT बाट ११,००० USDT मा पुगे। २०x लेभरेज गरिएको परिदृश्यमा, तपाईंको लामो ०.२ बीटीसी स्थितिले २०० अमेरिकी डलरको बृद्धि हुन सक्थ्यो (बिनान्स फ्यूचर यसका प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा धेरै कम छ)। जहाँसम्म, १.२25 बीटीसीको स्थिति १२ ax लेभरेज परिदृश्यमा लिँदा तपाईंको नाफा १,२50० अमेरीकी डलरमा बढ्नेछ।
Ind. दयालु अनुस्मारक: लाभ उठाउँदा ट्रेडिंग गर्दा सावधान हुनुहोस्।
सम्झनु: उच्च पुरस्कार उच्च जोखिमको साथ आउँछ।
बिटकॉइनको मूल्य द्रुत गतिमा उतार-चढ़ाव गर्न सक्छ, यसलाई अत्यधिक अस्थिर सम्पत्ति बनाउँदछ। जसरी लिभरेटले नाफालाई गुणा गर्न सक्छ, जब एक प्रयोगकर्ताले खरीद / लामो स्थिति खोल्दछ,
वा जब तपाईं एक बेच्ने / छोटो स्थिति खोल्नुहुन्छ,
र यसले जोखिम र सम्भावित घाटा पनि थप्न सक्छ जब बजार माथि जान्छ।
तपाई कतिवटा जोखिमहरूको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ?
त्यहाँ एक निश्चित मूल्य बिन्दु हुनेछ जहाँ तपाइँको स्थिति लिक्विड हुनेछ, र तपाइँ त्यो स्थितिमा लगानी गरेको पैसा गुमाउनु हुनेछ।
उच्च लाभले खुला स्थितिहरू कम पूँजी गहन बनाउँदछ।
उदाहरण को लागी, एक १००० USDT स्थिति को लागी initial० USDT को एक प्रारम्भिक मार्जिन मात्र चाहिन्छ।
जबकि, कम प्रारम्भिक मार्जिन एक डबल-एज तरवार हुन सक्छ किनकि मूल्यको अस्थिरताले मार्जिन डिपोजिटहरू भन्दा बढी गर्न सक्दछ।
त्यस्तै रूपमा, व्यापारीहरूले तरलता रोक्नको लागि उनीहरूको वालेटमा पर्याप्त सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ।
No. तपाइँको लाभ प्राथमिकतामा फरक पर्दैन, Binance फ्यूचर्स तपाइँ द्वारा समर्थित छ।
फ्युचर्स ट्रेडिंगमा संलग्न जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखी, बिनान्स फ्यूचरको शीर्ष प्राथमिकता प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षा र सम्भावित घाटा कम गर्ने हो।
बिनान्स फ्यूचर्सले होल्ड ऑर्डरहरू प्रदान गर्दछ, नाफा अर्डरहरू सीमित गर्दछ, र अन्य विकल्पहरू तरलता प्राप्त हुनु अघि, जब तपाईं बजारमा नजर राख्नुहुन्न।
बिनान्स फ्यूचर्सको उद्देश्य उद्योगमा दिगो क्रिप्टोकरन्सी-आधारित फ्यूचर ट्रेडि bring्ग ल्याउने छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई मानसिक शान्ति प्रदान गर्दछ, सम्भाव्य उच्च जोखिम लिँदा पनि।
बिनान्स फ्यूचर्स लीभरेज ट्रेडिंग परिष्कृत जोखिम इञ्जिन र लिक्विडेसन मोडेलबाट चल्दछ जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई द्रुत नतीजाहरू प्रदान गर्दछ, जसमा धेरै सुरक्षा सुविधाहरू समावेश छन् जुन तपाईंलाई अधिकतम सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
No. कुनै डाउनटाइम बिना अनुकूलित प्रयोग प्रदान गर्नुहोस्।
कस्टम लिवरेज कार्यान्वयन बजारमा शून्य डाउनटाइम प्रभावको साथ प्रदान गरिएको छ, बिनान्स टोलीका लागि एक प्रमुख माइलस्टोन।
हामी हाम्रो ट्रेडिंग अपरेसनमा बाधा नगरी हाम्रो भविष्यको ट्रेडिंग प्लेटफर्ममा अपग्रेड र सुधारहरू प्रदान गर्न चाहन्छौं।
र गत महिनामा हामीले अपग्रेड गरेका सबै अपग्रेडहरूको साथ, प्लेटफर्मको गति बढ्ने क्रममा के हुन्छ भनेर हेर्न रमाईलो हुनेछ।
आज Binance फ्यूचर्स मा व्यापार सुरु गर्नुहोस्!
जोखिम चेतावनी: खरीद, बिक्री, होल्डिंग, वा क्रिप्टोकरन्सी फ्यूचर ट्रेडिंगमा भाग लिनु उच्च बजार जोखिमको साथ एक गतिविधि हो।
थप पोष्टहरू सिफारिश गर्नुहोस्